Falanqeynta Kulanka Darbiga Ee Arsenal Vs Manchester City Horyaalka Premier League
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka Darbiga ee Arsenal Vs Manchester City Horyaalka Premier League
Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium ku soo dhaweyndoonta kooxda Manchester City oo heysa hogaanka horyaalka kuwaasi oo aan laga badin kulamadii ugu danbeeyay ee horyaalka.
Arsenal ayaan qabin wax walwal dhaawac oo cusub ah oo ka dhashay kulankii Europa League ee ay barbaraha la galeen Benfica khamiistii.
Kieran Tierney ayaa ku soo bilaaban kara ka dib markii uu ka soo laabtay dhaawac uu muddo bil ah ku maqnaa isagoo bedel ku soo galay ciyaartaas, laakiin Thomas Partey ayaa weli shaki ku jiraa taam ahaanshihiisa.
Gooldhaliyaha ugu sareeya kooxda Manchester City ee Premier League Ilkay Gundogan ayaa ku soo laabtay tababarka ka dib markii uu seegay guushii Everton.
Manchester City ayaan laga badinin 10 kii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League, iyagoo laga dhaliyay ugu yaraan labo gool sagaal ka mid ah kulamadaas.
Arsenal ayaa laga badiyay todobo kulan oo isku xigta oo horyaalka ah oo ay la ciyaareen City, iyagoo ku guuldareystay inay shabaqa soo taabtaan seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku ciyaareen garoonkooda.
Gunners ayaa ku guuldareysan karta inay wax gool ah ka dhaliso afar kulan oo isku xigta oo garoonkeeda ay ku wajahdo isla koox ka soo horjeeda markii ugu horeysay taariikhdooda.
Guushii ay Arsenal ka gaadhay kooxda Leeds kulankii ugu dambeeyay ayaa ahayd midkii ugu horeeyay ee afar kulan oo premier League ah.